EYONA MIDLALO MIBINI YEFILIMU EMNANDI YESHUMI LEMINYAKA LOKUGQIBELA YIDND PODCAST - UMNIKELI
Indawo yoTyelelo: Eyona Midlalo bhanyabhanya iQhoshelayo kule minyaka ilishumi idlulileyo ngamaDunge kunye neeDragons Podcast
Ibhili maher stan lee tweet
Isiqendu sokuqala se Indawo yoTyelelo yayihlekisa.
Imikhosi ye-comedy podcast Umntakwethu, uMntakwethu, kunye nam ( MBMBaM , kubahlobo), uJustin, uTravis noGriffin McElroy, bebehlekisa indlela yokujongana nekhefu lobuzala likaJustin xa omnye wabo ecebisa ukuba bazirekhode ngokwabo bedlala iiDungeons neeDragons. Akukho mntu wayelindele ukuba iseshoni yokuqala-yamakhwenkwe kunye notata wabo, uClint, badlala Imayini elahlekileyo yePhandelver Umkhankaso oqala kwi-5th Edition esetiweyo-ukuya naphi na. Bayikhupha njengesiqendu se MBMBaM , Ukucinga ukuba kuya kuba yinto enye. Kodwa ngokungalindelekanga, abaphulaphuli bayayithanda, kwaye kungekudala uGriffin, umphathi wezisele, wayekhokela abalinganiswa bakhe kwibali lokuyila kwakhe.
Kwiminyaka emibini enesiqingatha kamva, umboniso yingxelo ebaliweyo yamabali amnandi kunye necebo lokujija, useto olukhethwe nguMcElroy ngokukodwa kunye nenqaku elikhulu labalinganiswa, kunye nesandi santlandlolo sikaGriffin. Kukusondela esiphelweni sephulo layo lokuqala, umboniso oqale njenge-goof uye waba yenye yezona ngxelo zintlandlolo kunye nezinomdla kwimemori yakutshanje.
Ibali lilandela uMagnus Burnsides (umlweli womntu, odlalwa nguTravis), uMerle Highchurch (umfundisi omncinci, odlalwa nguClint), kunye noTaako (iwizard ephezulu, edlalwa nguJustin) njengoko bezingela uthotho lwezinto ezinamandla zomlingo ezibizwa iiGrand Relics.
Olu luhlu lunokubonakala ngathi luhamba njengendlu yokuhamba emhadini, kodwa umhlaba uGriffin kunye nabadlali bayakha, isiqephu esinye ngexesha, ayifani nayo nayiphi na into, etsala kuyo yonke into Ukukhawuleza kunye nomsindo ukuya Usuku lwegroundhog kwii-synths zomvelisi womculo we-elektroniki onguvulindlela Ukufa kukaGarson.
Zininzi ezinye iipodcast zeD & D kunye nemiboniso yeYouTube, kodwa Indawo yoTyelelo Nguye kuphela okwaziyo ukuguqula lo mdlalo ube yinto engekhoyo yabadlali abanokufuna ukuyimamela, ngaphandle kokuthembela ngokupheleleyo kuburharha. Bakwenzile oko ngokuyinxalenye enkulu ngokuchaza ngokucacileyo iindlela zokudlala-zombini iitopu zefantasy ezidiniweyo ezinxulunyaniswa nomdlalo ngokwawo kunye nomfanekiso weqela lamakhwenkwe oluntu oludlalayo. Ziziqhulo, kodwa ayisiyiqhulo esinye esikhulu. Libali elimnandi, kodwa ayisiyi-Tolkien-ephefumlelweyo ye-fantasy cliché. Ngamafutshane, libali le-esile elilungileyo elenzeka ukuba lakhelwe kwifomathi engaqhelekanga.
Yintoni kanye kanye le fomathi? Ngaba ngumdlalo kanomathotholo? Ukufundwa okumangalisayo kwinoveli yakho-yokhetho lwakho-lokuzonwabisa? Umdlalo omnye omde wokuphucula? Kucacile ukuba nangona inezinto ezininzi zeentsomi kunye nokusebenza, olu hlobo lwengxelo luhlobo olutsha ngokupheleleyo.
Abantu bebesebenzisa i-RPGs kwitafile yetafile ukuxelela amabali nabahlobo babo amashumi eminyaka, ewe. Kodwa Indawo yoTyelelo iphantse yahluke kwiseshoni ye-D & D yemihla ngemihla njengoko i-D & D uqobo isuka kwimidlalo yemfazwe eyiphefumleleyo. Xa uGary Gygax noDave Arneson babhala umdlalo, baqala ngomdlalo obizwa ngokuba Chainmail -Inkqubo apho abadlali bexhobe ngedayisi kunye nabalawuli babedibanisa imikhosi emincinci ngokuchasene-kwaye bayiguqula ibe yeyomnye apho umdlali ngamnye alawula iqhawe elinye, efaka ukubakho kweyelenqe kunye nokubonakaliswa apho bekungekho khona ngaphambili.
Indawo yoTyelelo (ayisiyiyo kuphela umboniso kolu hlobo-icaphula iGriffin Abahlobo etafileni njengomnye umzekelo) uthatha inkqubo yomdlalo kwaye ayisebenzise ukwakha ukuzibandakanya, ukuphulaphula iintsomi. Aba bantu bane abadlala i-D & D. Ngabantu abane ngokubambisana bebalisa ibali, kunye ne-D & D njengamathambo.
Apho i-DM yesiqhelo kufuneka ilinganise indawo edlala indima, yokuhlola, kunye nokulwa izinto zomdlalo, uGriffin kufuneka alinganise bonke abo, kunye neetshathi zekhosi ezantsi kumdlalo omkhulu weqonga, kunye nokwenza isiqephu ngasinye sibandakanye abaphulaphuli. Yindlela eyahlukileyo yokudlala, utshilo. [Asinakukwenza] ukuntywila emhadini ngokwendabuko apho sizama ukufumana amanqanaba kwaye sifumane isikrweqe esipholileyo kunye namakrele nezinto… ngumboniso odikayo ukumamela.
Umlingo womboniso, njengowomdlalo ngokwawo, luhlobo lwentsebenziswano. Ngelinye ixesha inokubangela impambano kwi-DM (UGriffin uyavuma ukuba ngamanye amaxesha unetyala lokuphoswa kukaloliwe owaziwayo, okanye ukunyanzela abadlali ukuba bahambe ngendlela enye), kodwa Indawo yoTyelelo , Abadlali abalinganiswa abenza into uGriffin angakhange ayilindele kukhokelele kwezinye zexesha elimangalisayo kwipodcast.
Ukhumbula isiqendu esikwi Umdlalo wokubandezeleka I-arc apho uTaako noMerle batsalela khona uMagnus elunxwemeni lokufa. Ndiza kumtsala, ngokusisiseko, kwinqwelomoya yokufa, kwaye uJustin noTata babefana, 'Hayi!' uthi. Kwafuneka ndililahle kude elo bali. Kodwa loo mzuzu apho bagcina khona iMagnus yimizuzu eyintandokazi yabantu kuyo yonke imiboniso.
Kukho olunye ungqimba lwentsebenziswano, nalo luphakathi kweMcElroys kunye nabaphulaphuli bomboniso. Ngexesha elifanayo njengokubambisana, ukubaliswa kwamabali emidlalo akuyona into entsha, loo maleko ongezelelweyo ayenza le mithombo yeendaba ipodcast ngendlela eyiyo yekota-uhlobo lwentsomi olungenakubakho nje kumaxesha obumnyama bangaphambi kwezentlalo. Abalinganiswa bomdlali, ngakumbi, benziwe kakhulu ngabaphulaphuli.
UJustin ukhumbula indlela enkulu ngayo ifuthe lobugcisa be fan kaTaako eyaqala ukubonakala yayinayo kumlinganiswa. Wayehlala ekhangeleka epholile kwaye enesitayile, kwaye loo nto yandenza ndaziva ngathi, ‘Yhu, bambona ngalendlela endingazange ndambona ngayo ngaphambili.’ Kwaye oko kwanceda ukwenza ikhowudi ukuba ngubani.
UJustin usebenzise olo tshintsho lubonakala ngathi luyintsholongwane. Kuthathe ixesha, nangona kunjalo, ukuba afike apho, njengoko iiMcElroys ziye zafumanisa ukuba umboniso ungaphatha ithoni enzulu. Ukuba ibali liyatshintsha kwaye liqinise ngokuhamba kwexesha yenye into eyahlukileyo yokusebenzisa i-D & D njengesixhobo sobugcisa, kwaye oko kuthetha ukuba ukuzama ukucofa le canon ngumsebenzi ohluke kakhulu kunoluhlu lweencwadi okanye iimuvi.
Njengoko u-Justin ebeka, umlinganiswa awunguye umgca othe ngqo, liqela lamanqaku edatha. Apho abaphulaphuli benza uTaako umlinganiswa okhupha umtsalane wefoppish kunye nobuchule bokungazami, u-Justin wamnika ukuba sesichengeni esinokuphindeka esingenakulindeleka kwasekuqaleni komboniso.
inkukhu kwindlu yengca emhlophe
UJustin ubona ibali likaGriffin njengamandla omboniso, esithi, Ndiza kubeka umntakwethu abe ngumbalisi ngokuchasene kakhulu naye nabani na emhlabeni. Akunjalo, nangona kunjalo. Kuyinyani ukuba ubhale ibali elikhulu-elothusayo elikhulu, lomntu olingelokugqibela ukuzama ukubalisa I-Pokemon inoveli wabhala kwibanga lesihlanu-kodwa eyona nto ichazayo kulo mboniso kukunyaniseka okuthandekayo entliziyweni yayo.
Ukuba kukho inhlonipho enye apho abakwaMcElroys ingabo kuphela abantu abanokuthi benze le nto, yile, ngokwentetho yabalandeli, balungile, amakhwenkwe alungileyo — eyindlela yokuba bathi bobane ngabona banobubele kwaye uninzi lwabantu abakhathalayo onokuze ufune ukudibana nabo. Into abayenzayo yinto enqabileyo kwaye ekhethekileyo ayisiyiyo kangako kuba iyaqhubeka inomdla, iyahlekisa, kwaye iyamangalisa, kodwa ekubeni ingenalo ithambo lokugxeka okanye elibi emzimbeni wayo.
Xa i-nerd isetyenziswa njengesithuko, eyona nto kuthethwa ngayo kukuba umntu othukayo uyayithatha into ayithathayo abanye abantu bayibone njengengabalulekanga. I-D & D ithathwa njenge-nerdy kuba yinto enxitywayo enxibe abantu abadala.
Zininzi iindlela zokuphatha eso sityholo: ukuba uyicis, ithe tye, umhlophe oyindoda, ungajika ubukrakra uze uzipeyinte, isitayile seGamergate, njengegcuntswana elitshutshiswayo ngelixa ujikelezisa amehlo akho kuxinzelelo lwangempela. Unokuzikhusela ngokuphatha into oyithandayo njengesiqhulo. Ungadlala ii-RPGs, kodwa awunguye ezo Iintsholongwane. Yintoni enqabileyo kukuthatha isigqibo sokuba bobabini baqhubeke nokuyithanda le nto kwaye bameme nabanye abantu ukuba bayithande, nayo. Yiloo nto Indawo yoTyelelo iinzipho.
Phakathi kwenkcubeko ye-nerd edla ngokukhetha okanye intshaba kwabasetyhini nakwabancinci, abakwaMcElroys bazimisele ukuxolisa xa benze ngokungazi ngokungalunganga liqela elithile labaphulaphuli. Xa abalandeli bakhalaza ukuba ukufa ngesiquphe kwesibini esithandanayo kunokubonwa njengomzekelo we ngcwaba amafanasini akho trope, UGriffin wazisa kwangoko omnye umntu othandana naye.
Kwaye ngelixa uburharha ngamanye amaxesha buthuntu, ayikhe ikhohlakele. Senze umzamo oqinisekileyo wokwenza uburharha obungakhange bubethe phantsi, utsho uJustin. Okanye phezulu. Ukukhanya nje ekubethweni ngokubanzi.
Oko kwenza ukuba ipodcast ibe yindawo evuyayo ngokukodwa, ekhuselekileyo kunye nendawo eqinisekisayo. Kweminye, yindlela yokujongana noxinzelelo, uxinzelelo kunye nezinye izifo zengqondo. Nanini na [ukuba] ndonganyelwe ziingcinga zokungena ngaphakathi okanye ukothuka, watsho umphulaphuli uBreanna Robles kwisithuba sikaFacebook, ndimamela esinye seziqendu zam endizithandayo, kwaye oko kusoloko kundinceda ndizole.
Ngomkhosi womboniso wabalandeli be-LGBTQ +, ukubandakanywa okuqhelekileyo kwabalinganiswa be-queer kukuphefumla komoya omtsha. Xa ndibona abantu besithi uLup [i-NPC] uguqulwe ngokusemthethweni ndalila, watsho umphulaphuli owacela ukuhlala engaziwa. Andikaphumi kwaye kwakuthetha lukhulu.
Ekupheleni kwephulo langoku, elaziwa njenge Ibhalansi Arc, UGriffin uceba ukuya kwi-hiatus evela kwi-DMing. Akukho zicwangciso zicacileyo zokuba kuzakwenzeka ntoni emva koko, kodwa kuya kubandakanya enye iMcElroys ethatha ithuba lokuqhuba umboniso (uGriffin uthetha ngokuqaqamba kwamakhono kaTravis's DMing, aboniswe kwiziqendu zebhonasi ezininzi). UClint ebesebenzisa inkqubo ye-RPG ephezulu. Sibe nabantu abathi, ' Ndifuna okungakumbi kuTaako, Merle, naseMagnus, utshilo uGriffin. Kodwa andifuni ukuba ibali ligqithise ukwamkelwa kwalo. Ndicinga ukuba oko kungayihlisa.
Kwaye kunjalo, le ayisiyiyo ngokwenene iD & D podcast.
Abantu banentambo yokwenza amabali: abantwana bayenza ngokwendalo, kodwa uninzi lwethu, ngaxa lithile, siyalibala ukuba kanjani. I-D & D, ngokusemandleni ayo, isasaza iindaba ezilungileyo zokubalisa ibali kuye wonke umntu. Indawo yoTyelelo yandisa loo myalezo. Uninzi lwabaphulaphuli lundixelele ukuba ipodcast ibancede bafumanisa ubuchule, hayi ngokuzama nje i-D & D, kodwa ngokuzoba, okanye ukubhala eyabo fiction. Ukumamela iibhola ezine ezithandekayo zokuloba umhlaba omnandi uya kuyenza loo nto.
I-sophie campbell jem kunye neeholograms
(umfanekiso nge UGriffin McElroy / Iscreengrab sikaYouTube )
UKatelyn Best ngumbhali nentatheli ePortland, e-Oregon. Umsebenzi wakhe uvele kwiCatapult, kwezemidlalo eziGqwesileyo, nakwiToast. Mlandele kwi-Twitter @YoKukon .
ilivo lekora yexesha 1
Ingonyama ikumkani kwi-3d
Dr ngubani vincent van gogh isiqendu
steven iphela - ihlosi philanthropist
I-DC comics evela kwi-dc yolonwabo